के कारणले अष्ट्रेलियामा आउन ३ वर्षे प्रतिबन्ध लाग्छ ? - Himalayan Kangaroo
के कारणले अष्ट्रेलियामा आउन ३ वर्षे प्रतिबन्ध लाग्छ ?
Posted by Himalayan Kangaroo | १ माघ २०७२, शुक्रबार ११:४९ |
मेरो भिसा बिग्रेको कारणले म अर्को हप्ता नेपाल फर्कदैंछु । यसरी फर्केपछि अर्को तीन वर्षसम्म फेरि अप्लाई गर्न पाइदैंन रे भन्ने सुनेको छु । के यो साँचो हो ?
तपाईंले ‘भिसा बिग्रेको’ मात्र भन्नुभएको छ, तर के–कति कारणले कुन भिसा अस्वीकृत (रिफ्युज) वा रद्ध (क्यान्सल) भएको हो भन्ने खुलाउनुभएको छैन । त्यसैले तपाईंको प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन अप्ठ्यारो हुन्छ । यद्यपि पुनः अस्ट्रेलिया प्रवेश गर्न नपाउने अवस्थाहरूको बारेमा छोटो जानकारी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु ।
कसैले आफ्नो भिसाका शर्तहरूको गम्भीर उल्लंघन गरेको पाइएमा उसलाई तीन वर्षसम्म अस्ट्रेलिया फर्कन नपाउने गरेर प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ ।
यस्तो प्रतिबन्ध निम्न अवस्थाहरूमा लाग्न सक्छः
१. आफूलाई दिइएको भिसाको अवधि सकिएको २८ दिनभन्दा पछाडिसम्म अस्ट्रेलियामा बसोबास र
२. निम्न कारणले गर्दा तपाईंको भिसा रद्ध भएमाः
क. तपाईंले अध्यागमन विभागलाई नक्कली कागजात वा विवरण बुझाउनुभएकोले
ख. भिसाका शर्तहरू उल्लंघन हुने गरी काम गर्नुभएकोले
ग. विद्यार्थी भिसामा हुँदा भर्ना नगरी बस्नु भएकोले
घ. तपाईं सक्कली विद्यार्थी वा पर्यटक होइन भनी पत्ता लागेकोले
के यसरी लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनको लागि अनुरोध गर्न मिल्छ?
यो प्रतिबन्ध हट्दैन । तर यदि तपाईं कुनै अस्थायी भिसा जस्तैः विद्यार्थी भिसा, टुरिस्ट भिसाको लागि आवेदन दिन चाहनुहुन्छ भने त्यो आवेदनको प्रयोजनको लागि मात्र भनेर चाहिँ यो प्रतिबन्ध हटाउनको लागि अनुरोध गर्न सकिन्छ । यसको लागि तपाईंले अध्यागमन विभागलाई लिखित रूपमा अनुरोध गर्नुपर्दछ । तर के कुरा हेक्का राख्नुपर्छ भने यो प्रतिबन्ध साधारणतयाः धेरै सजिलैसित भने हटाइँदैन । कुनै अस्ट्रेलियाको नागरिक वा स्थायी बासिन्दाको हितलाई असर पर्ने र कुनै दया गर्नुपर्ने (Compassionate) वा मजबुर (Compelling) कारण भएमा मात्र यो प्रतिबन्ध हट्न सक्छ ।
म मेरी आमालाई स्पोन्सर्ड फ्यामिली भिजिट भिसामा तीन महिनाको लागि अस्ट्रेलिया घुम्न बोलाउन चाहन्छु । यसको लागि मैले सुरुमै धरौटी बुझाउनु पर्ने हो?
धरौटी माग्ने कि नमाग्ने भन्ने कुरा केस अफिसरको स्वविवेकको कुरा हो । यदि भिसा आवेदनसाथ तपाईंले आफ्नो आम्दानीको स्रोत, बैंक ब्यालेन्स सर्टिफिकेट आदि संलग्न गर्नुभएको छ र केस अफिसरलाई तपाईंकी आमाले आफ्नो भिसाका कुनै पनि शर्त उल्लंघन नगरिकन भिसा अवधिमै अष्ट्रेलिया छोड्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लागेमा धरौटी रकम नमाग्न पनि सक्छन् । त्यसैले सुरुमै धरौटी बुझाउनु पर्दैन । केस अफिसरले तपाईंलाई सम्पर्क गरेर यति रकम धरौटी जम्मा गर्नुहोला भनेपछि मात्र तपाईंले रकम जम्मा गर्दा हुन्छ ।
PreviousVeganism: Reasons why people go Vegan? By Mayush Shrestha
Nextकाठमाडौमा विद्युतिय रेलको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
८ चैत्र २०७४, बिहीबार १२:१५
अष्ट्रेलियामा एनआरएनको निर्वाचन सुरु, आजै मतपरिणाम आउने
२४ असार २०७४, शनिबार ०२:२३
अष्ट्रेलियामा कमनवेल्थ बैंकका ग्राहकहरु ठगिने क्रममा वृद्धि,यसरी ठगिन्छन् ग्राहक
२९ बैशाख २०७४, शुक्रबार १५:४९